Catechesis - Mandalay Catholic Archdiocese
Commission on Catechesis & Catechists
ဘုရားစကားသင်ကြားမှုနှင့် ဓမ္မဆရာ/မ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးကော်မရှင်
ကက်သလစ်ဘာသာဝင် အားလုံးတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ မွန်မြတ်သော တရားတော်များ၊ အသင်းတော်၏ ရှေးထုံး အစဉ်အလာနှင့် သွန်သင်ချက်များ၊ စက္ကရမင်တူးများ စသည်တို့ကို ယုံကြည်စွာ ခံယူခြင်းအားဖြင့် ရင့်ကျက်သော ခရစ်ယာန် များ ဖြစ်လာရေးဆီသို့။
ကျွန်ုပ်တို့၊ ဘုရားစကားသင်ကြားမှုနှင့် ဓမ္မဆရာ/မ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးကော်မရှင်အနေနှင့် . . . ကက်သလစ် ဘာသာဝင် အားလုံး တို့၏ အသက်တာကို ရင့်ကျက်စေရန်နှင့် လူသားအားလုံး ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန် ဟောပြောခြင်း၊ သွန်သင်ခြင်း၊ ပြုစု ပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် အစေခံခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။
ဘုန်းကြီး၊ ကိုရင်၊ သီလရှင်၊ ဓမ္မဆရာ/မများ ရှိနေပါပြီ။ မြတ်သောအယူဝါဒ စာအုပ်ရှိပြီ။
ရုပ်ပုံ၊ သီချင်း၊ ပုံပြင်များ နည်းပါးနေသည်။ သင်ကြားမှု စနစ်တကျမရှိ၊ လူကြီးများအတွက် ဘာသာရေး အသိပညာ သင်ကြားမှု မရှိပါ။
၁။ To teach Catechism inasystematic way
၂။ To raise fund
၃။ To proclaim and witness what one believes
၄။ To form Monitoring Group (စီစဉ်သုံးသပ်မည့်အမှုဆောင်အဖွဲ့)
၅။ To serve in the works of mercy
၁။ To teach catechism inasystematic way by providing visual aids, religious songs, stories, pictures and textbooks.
တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်။ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ
လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများ။ ကိုရင်၊ သီလရှင်နှင့် ဓမ္မဆရာများ
လျာထားချက်ရလဒ်။ ဟောပြော၊ သွန်သင်၊ အစေခံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေခြင်း
အကောင်အထည်ဖေါ်မည့်ကာလ။ ဇွန်လ ၂၀၀၇ - ဇွန်လ ၂၀၁၂
၂။ Fund raising by inviting the foreign and local donors, by refunding from the teaching aids, by animating the faithful to be aware of the needs of the commission.
လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများ။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ ကိုရင်၊ သီလရှင်များ၊ လူကြီးမိဘများ
လျာထားချက်ရလဒ်။ ကော်မရှင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ထိရောက်အောင်မြင်ခြင်း
အကောင်အထည်ဖေါ်မည့်ကာလ ဇွန်လ ၂၀၀၇ - ဇွန်လ ၂၀၁၂
၃။ To proclaim and witness what one believes by preaching the Christian faith and reaching out to the neighborhood apostolate, by audio visual aids, by social gathering through religious entertainment, by distributing literature, by livingagood Christian life.
ဦးဆောင်အဖွဲ့။ ကော်မရှင်အသင်းသားများ၊ ကိုရင်၊ သီလရှင်များနှင့် လူကြီးမိဘများ
လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများ။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဘုရားစကားသင်ကြားရေးကော်မရှင်
လျာထားချက်ရလဒ်။ ယုံကြည်ခြင်းမှာ စွဲမြဲအခြေခိုင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်စင်ကြယ်သော အသက်တာကို ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း
၄။ To form Monitoring Group (စီစစ်သုံးသပ်မည့့်် အမှုဆောင်အဖွဲ့) and to see and to advise.
- (၃) လတစ်ကြိမ် စည်းဝေးရမည်။
-ကလေးများအတွက် Sunday School နှင့် ကျောင်းပိတ်ရက်များမှာ ဘုရားစကားသင်ကြားရန် စီစဉ်လမ်း ညွှန်ရမည်။ -လူငယ်များအတွက် ဘာသာရေး အသိပညာကို တစ်နှစ်လျင် (၃) ရက်သင်တန်းပေးမည်။
-လူကြီးများအတွက် ဘာသာရေးအသိပညာသင်တန်းစီမံပေးမည်။ ဥပမာ ကျမ်းစာသင်တန်း -ဒုတိယဗာတီကန်၏ သင်ကြား မှုများ လေ့လာစေမည်။
လက်တွဲလုပ်ဆောင်သူများ။ ဓမ္မဆရာ^မ များ
လျာထားချက်ရလဒ်။ လုပ်ဆောင်မှုများ အဆင်ချော၍ စနစ်တကျတိုးတက်ခြင်း
၅။ To serve other in the works of mercy by visiting the sick, feeding the hungry and helping the needy shelter and clothing, and reaching out to lapsed Catholic.
လျာထားချက်ရလဒ်။ တစ်ပါးသူအား အစေခံတတ်ခြင်းစိတ်ထား၊ မွန်မြတ်သောတရားတော်ကိုလက်တွေ့နှင့် သက်သေခံခြင်း။